विरोधीमाथि खनिनुस्, अरिंगालझैँ !’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई जब निर्देशन दिए, त्यसको जवाफमा सामाजिक सञ्जाल नै अरिंगालमय भयो। सामाजिक सञ्जालले नयाँ विषय पायो- अरिंगाल।
व्यंग्य विधामा खप्पिस प्रधानमन्त्रीले अरिंगाल बिम्ब प्रयोग गरेका मात्रै के थिए, फेसबुक र ट्वीटरभरि अरिंगाल भुनभुनाउन थाले। नेकपाका नेता-कार्यकर्ताबाट अरिंगाल-भूमिका चाहेका थिए, प्रधानमन्त्रीले। तर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कतिले ट्वीटरमा नामै फेरेर ‘अरिंगाल’ राखे। कतिले यसको प्रजातिमाथि विश्लेषण गर्न थाले।
केहीले ‘अरिंगाल भुटेर खाँदा मीठो हुन्छ’ भन्दै अरिंगाल भुटेको फोटो हाल्नसमेत भ्याए। केहीले यसलाई सामाजिक बेथितिसँग जोडेर लेखे।
पढौं, केही अरिंगाल ट्वीट:
१) आत्मा गुरागाईं : नेकपाका कार्यकर्तालाई नि गाह्रो छ। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले अरिंगाल बन्न निर्देशन दिनुभएको छ। अझै उडुस, उपियाँ, जुका बन्नुस् भन्न त बाँकी नै छ। जे होस्, कमरेडहरू तयारी अवस्थामा चैं रहनुहोला। कति बेला के बन्नुपर्ने हो ?
२) गनी अन्सारी : राति सपनामा अरिंगालै अरिंगाल देखेछु। अघि बिहान उठेर आमालाई सुनाउँदा ‘तिमी ठूलै मान्छे हुन्छौजस्तो छ’ भन्नुभयो। बिहानैदेखि कहाँ जाऊँ, के गरौं जस्तो भइरहेको छ।
३) किशोर नेपाल : हरेक दिन बिहान अखबार सँगसँगै एक हूल अरिंगाल आउँछन् र चिल्न थाल्छन्। के यही नै हो हाम्रो नियति ?
४) एलिजा ढकाल : विरोध गर्नेको विरुद्ध अरिंगाल भएर जाइलाग्न तुकको तर्क पनि चाहिएला नि ! विरोधका लागि विरोध र सकारात्मक कामका लागि विरोध तपाईं पनि नगर्नुस्, हामी पनि गर्दैनौं।
५) विश्वप्रकाश शर्मा: राजनैतिक दर्शनको प्रष्ट फरक !!
प्रम विपिले एक पत्रीकालाई नियमित रुपले मासिक रकम दिएर आग्रह गर्नुभएछ ञसरकारको गल्ती कमजोरी निरन्तर औंल्याइदिनुस्, जनभावना बुझेर काम गर्न मलाई सजिलो हुनेछझ १ दुइतिहाइका अर्का प्रमले आज अह्राउनु भयो‘ञविरोध गर्नेका विरुद्ध अरिंगाल भएर जाइलाग्नोस् ।
वीरगञ्जको सडकमा मिठाई बजार, नाला छेउमै पाक्छ जेरी
डा. केसीसँग भएको सहमति विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक तयार
आपसमा जुधेर एक गैंडाको मृत्यु
प्रचण्डले पिङ खेलेपछि स्थानीयले भने, प्रचण्ड त भर्खरको पो देखिँदा रै’छन्
ओम हस्पिटलमा ७३ वर्ष पुगेका चिकित्सकलाई अनिवार्य अवकाश
नेपालमा इन्टरनेटका अश्लील सामाग्री तथा पोर्न साइट बन्द गरिँदै
साइकलमा अल्झेको मन